Maty ve ny taona 2018? Ity no fomba hitahiry azy | Martech Zone
Maty ve ny taona 2018? Ity ny fomba fitehirizana azy
Alatsinainy Aprily 16, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Jon Croy
Ny ankizy sy ny ankizy tao am-pony dia nalahelo noho ny fianjeran'ireo Kilalao 'R' Us, stalwart indostrialy ary ny rojom-barotra sisa tavela izay nifantoka manokana tamin'ny kilalao. Ny fanambarana ny fanidiana ny fivarotana dia nanala ny fanantenana rehetra mba hamonjy ilay goavambe mpivarotra - toerana tsy fahaizan'ny ray aman-dreny, fanjakan'ny fahagagana ho an'ny ankizy.
Ny tena mampalahelo dia ny Toys 'R' Us mety ho voavonjy.
Ilay superstore feno entana dia nianjera tamin'ny fandrika amidy isan-karazany, ary tsy irery izy io. Cushman & Wakefield dia manombana fa Etazonia ny fanidiana ny fivarotana dia hitombo 33% amin'ny taona 2018, manala orinasa maherin'ny 12,000
Eo anelanelan'ny fahafatesan'ny RadioShack, ny fihenan'ny JCPenney sy ny firongatry ny hafa maro hafa, marary ny mpanjifa fanakatonana fivarotana! famantarana sy lohateny. Miaraka amin'i Sears, Claire sy Foot Locker vonona ny handefa outlet bebe kokoa, ny zavatra dia tsy tsara amin'ny mpivarotra biriky.
Raha jerena ny toe-javatra dia mety halaim-panahy ny hanondro ny mozika fiaviana Don McLean, mandritra izany fotoana izany mihira, 2018 dia ny taona maty ny antsinjarany! Saingy aza aseno ny fanairana. Misy fanantenana ho an'ireo mpivarotra antsinjarany izay vonona ny hizatra sy handray ireo fiovana marobe izay nivoatra ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny fahaveloman'ny farany
Mpivarotra maro no sahirana amin'ny fandresena ny Amazon Effect (ankoatry ny anton-javatra hafa), saingy tonga ny fotoana tokony hiovan'izany. Na dia voaporofo aza fa mpanohitra mahery an'ireo fivarotana nentim-paharazana ilay goavambe dot-com, tsy misy antony tsy ahitan'ny mpivarotra ny tena tanjony.
Raha te handresy ny sasany amin'ireo fanamby lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra dia tokony ho vonona ny mpilalao biriky sy mortara hanatsara ny fahafaha-mitahiry amin'ny fivarotana, hivarotra ary hampiroborobo ny entana, hameno ny elanelana misy eo amin'ny nomerika sy ara-batana, izay mampitombo ny tombom-barotra ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifany.
Wallet vs. fangatahana
Ity olana mahazatra ity dia nisesisesy hatrany nanenjika ireo tian'i Toys 'R' Us and Sports Authority. Tranga iray: efa nieritreritra ny antony niantsenanao ny Toys 'R' Us ve ianao?
Nandeha nividy fanomezana ny olon-dehibe ("fangatahana"). Ny Wallet kosa dia diplaoma iray na maromaro misaraka amin'ny niandohan'ny fangatahana. Ny Wallet dia tsy maniry ny hiditra amin'ny magazay - raharaha be io.
Ny mpanjifa Sports Sports dia niatrika olana toy izany, satria matetika ny mpivarotra dia miantsena amin'ny fiomanana amin'ny vanim-potoana fanatanjahantena vaovao. Avy eo hitan'izy ireo ny fiakaran'ny vidim-piainana ary sarotra ny hanohizana.
Misy tranga iray hafa - iray izay tian'ireo ray aman-dreny mankaleo mamono fotoana miaraka amin'ny zanany. Rehefa miditra ao amin'ny magazay roa, ny Wallet dia tsy manana drafitra manokana hizara vola. Ny ray aman-dreny ihany no miatrika izany loza izany, manantena fa afaka miditra sy mivoaka mora foana.
Ny fianakaviana manantena no maningana. Ny ray aman-dreny vaovao ("Wallet") dia faly mividy izay rehetra ilainy. Misy fetrany anefa ilay famirapiratan-jaza vaovao, noho izany, koa aza manantena ny hiparitaka haharitra ela aorian'ny:
Nihoatra ny fanindroany ny teti-bola
Tonga ny zaza vao teraka
Tonga ny zaza faharoa
Matetika ireo mpivarotra antsinjarany dia manadino ny fotoana ahafahana mampiray ny Wallet mahatohitra amin'ny fangatahana maika. Na dia misy fotoana aza toa somary mora ihany (oh: fianakaviana miandry), azo atao ny mampifanakaiky kokoa an'i Wallet sy ny fangatahana amin'ny:
Manome mpanjifa lisitra mazava sy fohy momba ny vokatra rehetra azo amidy
Manazava ny toerana misy ireo vokatra ireo
Ny fampiharana fitaovana izay afaka manampy ny mpanjifa miantsena amin'ny fomba mahomby kokoa, toy ny sarintany na lisitra fiantsenana nomerika
Fanamboarana ny firafitry ny magazay hihatsara fivezivezena ny fivarotana
Mampihatra fandaharam-pahatokisana toy ny mividy amin'ny Internet
Amin'ny farany, rehefa manana mpanjifa tsy voan'ny fivarotana vaky ianao, dia tsy dia mangataka andro sy maminavina ny fividianany.
Hafanàm-po an Transformation
Ny fanovana dizitaly dia tsy nisy ifandraisany amin'ny fandraisana andraikitra anatiny. Tsy maninona na ny Retailer X no nihevitra fa hevitra tsara io - mpanjifa nihevitra fa hevitra tsara io! Nampiroborobo ny fanovana ivelany sy kolontsaina izy ireo.
Ny Toys 'R' Us sy ny Manampahefana ara-panatanjahantena dia samy nomena fotoana hifanarahana amin'ny fanovana nomerika sy hifandray amina vondrom-piarahamonina miantsena. Tsy nahomby izy ireo tamin'ny farany, saingy mety ho hafa ny vokany.
Fahefana fanatanjahan-tena: Amin'ny maha-ray aman-dreny ahy dia te-hitsidika ny tranokalan'ny orinasa aho, hanambara ny fanatanjahantena, ny ligy ary ny ekipan'ny zanako ary hahazo kardinaly fanolorana ho an'ny entana misy.
Kilalao 'R' Us: Ity misy fotoana iray ahafahana mamorona rindranasa ahafahan'ny ankizy mizaha ny kilalao rehetra, manangana lisitra faniriana, avy eo manolotra izany amin'i Neny sy i Dada ho an'ny sivana sy fizarana (amin'ny alàlan'ny mailaka, media sosialy, sns.). Mety ho nanome vahaolana fiantsenana tsotra nefa mamirapiratra ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fialantsasatra ary fotoan-dehibe hafa.
Staples / magazay famatsiana birao hafa: Alao sary an-tsaina ny lisitr'ireo fitaovam-pianarana rehetra mifandraika izay mamokatra ho azy aorian'ny nanambarany ny lisitr'ilay zaza sy ny lisitr'izy ireo. Miaraka amin'ny fakana an-tsokosoko, ity endri-javatra ity dia ho sarobidy amin'ny ray aman-dreny be atao.
Tontolo iainana fivarotana
Mpivarotra maro no tsy nahatakatra ny maha-zava-dehibe ny tontolon'ny fivarotana, saingy izany tokoa ny zava-drehetra ho an'ny mpanjifa. Rehefa antitra, tsy misaina, tsy firafitra firy ny magazay, sarotra ny mivezivezy ary tsy dia manana mpiasa loatra, dia handeha amin'ny toeran-kafa ny mpanjifa, satria mbola mitady traikefa mividy tsy manam-paharoa nefa tsy milamina - eto no misy mpivarotra nentin-drazana afaka hanafaka.
Mba hitazonana ny varavarana hisokatra dia tokony hamerina handinika ny lasitra tany am-boalohany amin'ny fivarotana biriky sy laona ny mpivarotra. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahafaha-manao any amin'ny magazay, ny fananany ny kitapom-bolany vs ny fangatahana, ny fahazoana ny hevitry ny mpiantsena, ary ny fanamafisana ny elanelana misy eo amin'ny nomerika sy ny ara-batana, ny mpivarotra dia tsy tokony hiasa saina momba ireo goavambe e-varotra, na hanidy varavarana - satria hampitombo ny tombom-barotra sy hihatsara izy ireo ny zavatra niainan'ny mpanjifa.
Tags: Claire nyCushman & Wakefieldfananganana nomerikaFanovàna dizitalyFoot Lockerjc pennyjcpenneyfivarotanamagazay famatsiana biraoshack radioantsinjaranyfanavaozana antsinjaranyfivarotana varotraSearsfahefana ara-panatanjahantenafoto-tsakafokilalao r us
John no mpiara-manorina sy Lehiben'ny Marketing Officer ho an'ny Tondroo ao anatiny. Point Inside no namorona ny sehatra fanaovana sarintany an-trano azo ovaina indrindra sy manankarena ary mahomby amin'ny planeta an-tany.
Ny lohahevitra tokana ilainao amin'ny WordPress: Avada